उत्तम सुझावहरू न्यूयोर्कको यात्रा गर्नका लागि यात्रा समाचार
न्यूयोर्क यात्रा को लागी उत्तम सल्लाह
सुसाना Godoy | | न्यूयर्क
जब हामी लामो यात्रामा जान्छौं, हामी जहिले पनि योजना गरिएको सबै चीजहरू लिन जान्छौं, वा कमसेकम चीजहरू। यो सत्य हो कि हामीले कल्पनाकोलागि र यसका साथ ईम्प्रिभियसनमा केही छोड्नु पर्छ। त्यसो भए, न्यूयोर्कको यात्रा यो स्काईस्क्र्यापर्सको शहरमा गर्न र हेर्नको लागि अनौंठो र अन्तहीन चीजहरू हुन्छ।
तर सत्य यो हो कि सबै चीज सजिलैसँग जानको लागि, शृंखलामा शर्त लगाउनु जस्तो केही हुँदैन सल्लाह वा कदम जब न्यूयोर्कको यात्रा। आधारभूत थ्रेडलाई राम्रोसँग बाँधेर छोड्ने तरिका र यसरी, हामी आउँन र शहरको आनन्द लिन सक्दछौं जुन हामीले भनेका थियौं, कहिले पनि सुत्दैन! के हामी बन्द गर्छौं?
1 न्यूयोर्कका लागि सस्तो उडानहरू
2 तपाईंको यात्राको लागि भिसा
3 स्वास्थ्य बीमा सधैं यसको लायक हुन्छ
4 सधै अग्रिम आवासको खोजी गर्नुहोस्
5 न्यूयोर्कमा किनमेलको आनन्द लिनुहोस्
6 ब्राउजि data डाटाबाट सावधान हुनुहोस्
7 न्यु योर्कको लागि पैसा परिवर्तन गर्दै
न्यूयोर्कका लागि सस्तो उडानहरू
सबैभन्दा पहिले, हामीले मितिहरू छान्नु पर्छ र तिनीहरूसँगै, विमानको टिकटको लागि खोजी आवश्यक हुन्छ। यो कुनै जटिल कुरा होइन, किनभने आज हामीसँग धेरै खोज इञ्जिनहरू छन् जसले हामीलाई यस कार्यमा मद्दत गर्दछ। सँधै बचत गर्न, सधैं तपाईं वसन्तको समय र शरद chooseतु को छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सत्य हो कि पछि पनि यो चिसो हुनेछ र वर्षाले यसको रूप दिन सक्छ, तर शहरको सौन्दर्य पनि बढ्छ। यसबाट सुरू गरेर, यो उल्लेख गर्नुपर्दछ कि सिधा उडानको मूल्य, उदाहरणका लागि म्याड्रिडबाट, थोरै महँगो हुनेछ। त्यसोभए तपाईंसँग एक वा दुई स्टपओभरको सम्भावना छ। सँधै भनिएको स्टपओभरको समय जाँच गर्नुहोस्, ताकि एउटा उडानबाट अर्कोमा उडानको लागि चाँडो हिंड्नु पर्दैन र हामीलाई पर्याप्त समय दिनुहोस्। थप रूपमा, यात्रालाई छोटो बनाउनको लागि सिफारिश गरिन्छ कि यी स्टपओभरहरू भियनामा होइन लन्डन वा पेरिसमा हुनुपर्छ।
तपाईंको यात्राको लागि भिसा
तपाईंले देश प्रविष्ट गर्न आवश्यक कागजातहरू भनिन्छ 'IS'। यो कागजात हो जुन तपाईंले भर्नु पर्छ। तर चिन्ता नगर्नुहोस् किनभने यो आरामसँग अनलाइन गर्न सकिन्छ र यसको मूल्य १२ यूरो छ। यो संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी एक प्रकारको भिसा हो।
स्वास्थ्य बीमा सधैं यसको लायक हुन्छ
किनभने कहिलेकाँही हामी यसको बारेमा धेरै सोच्दैनौं, तर यो सत्य हो कि न्यूयोर्कको यात्रा हामीले हाम्रो पिठिमा छोपिएको पाउनुपर्दछ। यस अवस्थामा हामी कुरा गर्दैछौं राम्रो स्वास्थ्य बीमा छ। कुनै पनि कुरा भन्दा बढि किनभने त्यहाँ स्वास्थ्यको मुद्दा एकदम महँगो छ र हामी राम्रो पैसा बचाउनेछौं, यदि केहि हुने थियो भने साथ साथै प्रारम्भिक भय पनि। त्यसो भए, तपाईंको यात्राको दिनहरूको लागि बीमा भाँडामा लिनको लागि अत्यन्त सस्तो र राम्रोसँग लायक हुने छ।
सधै अग्रिम आवासको खोजी गर्नुहोस्
सायद हवाई टिकट भन्दा बढी, बस्ने ठाउँ खोज्नु महँगो हुन सक्छ। किनभने कुनै श doubt्का बिना, न्यू योर्कको यात्रा महँगो छ र lहोटल र लजिंगको पनि धेरै उच्च मूल्य छ। थप रूपमा, उनीहरूसँग दुई तारा वा तीन-तारे होटेलहरूसँग केही गर्नुपर्दैन जुन हामी यहाँ जान्दछौं। न्यूयोर्कमा तिनीहरू मध्ये केही सामान्यतया भय terrible्कर स्थितिमा छन्, यद्यपि तिनीहरूको अधिक किफायती मूल्य छ। तसर्थ, धेरै व्यक्तिहरू चार तारे होटेलहरूमा जान्छन्, कमसेकम थाहा छ कि उनीहरूले आरामदायी र पूर्ण रूपमा सफासँग ठाउँ पाउनेछन्। अरूले साझेदारी कोठा खोज्दछन्, यदि तपाईं एक राम्रो समूह हो भने, त्यसो भए यो जतिसक्दो चाँडो देख्न सुरु गर्नु आवश्यक हुन्छ। टाइम्स स्क्वायर क्षेत्रमा केहि राम्रा राम्रा विकल्पहरू छन्।
न्यूयोर्कमा किनमेलको आनन्द लिनुहोस्
किनकि सबै समस्या र खोजी वा पैसाको तनाव हुने छैन। एक पटक शहरमा, हामी सबै चीजहरू बढी शान्तसाथ लिन सक्छौं। कुन तरिकामा? खैर, गएर न्यू योर्क आउटलेट्स मा किन्नुहोस्। हो, यो एक उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो, किनकि तपाईंले प्रभावशाली मूल्यहरूको साथ ठूला फर्महरूबाट फेसन र सामानहरू फेला पार्नुहुनेछ। तसर्थ, धेरै व्यक्तिले फिर्ताको लागि एक थप सुटकेस किन्नु पर्छ। शहरबाट केवल एक घण्टामा तपाई मुख्य व्यक्ति मध्ये एक भेट्न सक्नुहुन्छ: 'वुडबरी साझा प्रीमियम आउटलेट'। जे होस् दुबै म्यानहट्टनमा उस्तै शहरमा तपाईं तथाकथित 'शताब्दी २१' पनि पाउन सक्नुहुन्छ।
ब्राउजि data डाटाबाट सावधान हुनुहोस्
यो स्पष्ट छ कि हामी आफ्नो मोबाइल फोन बिना बाँच्न सक्दैनौं। त्यसकारण जब यो न्यूयोर्कको यात्राको लागि आउँदछ, निश्चित रूपमा तपाइँ आफूले बनाउनु भएको हरेक छवि अपलोड गर्ने बारे सोच्नुहुन्छ। त्यस्तै WhatsApp वा कल मार्फत सन्देशहरू दिन को क्रम हुनेछ। तर हामी यस शीर्षकको साथ कुनै पनि प्रकारको डराउँन चाहँदैनौं। त्यसोभए, हाम्रो कम्पनीलाई सम्पर्क गरेर केसको बारेमा छलफल गर्न उत्तम हुन्छ, किनभने हुनसक्छ तिनीहरूले हामीलाई प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् जुन हामीलाई उपयुक्त छ। अन्यथा, हामी जहिले पनि एक प्रीपेड सिम कार्ड प्राप्त गर्न सक्दछौं जुन अपेक्षाहरू पूरा गर्दछ, जुन त्यहाँ छन्। थप रूपमा, तपाई जहिले पनि ठाउँहरू पाउनुहुनेछ जहाँ छन् शहरमा नि: शुल्क वाइफाइ, तर कहिलेकाँही हामी यसको लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैनौं, यसले हामीसँग भएका सबै विकल्पहरू थाहा पाउँदैन।
न्यु योर्कको लागि पैसा परिवर्तन गर्दै
फेरि, हामीले आफूलाई सूचित गर्नुपर्दछ र राम्रोसँग। किनभने यो सत्य हो केही बैंकहरूले उच्च शुल्क लिन्छन् मुद्रा विनिमय को लागी। घर छोड्नु भन्दा पहिले यो गर्नु राम्रो हुन्छ। समय भन्दा पहिले यो गर्नुहोस्, किनकि डलरहरू आउन केहि दिन लाग्न सक्छ, विशेष गरी जब हामी साना क्षेत्रहरूमा बस्दछौं। हामीसँग गन्तव्यमा आदानप्रदान घरहरू पनि छन् र प्रत्येकको उच्च दर हुन सक्छ। त्यसैले हामीले यसको बारे निश्चित रूपमा निश्चित गर्नुपर्दछ। यी सबै कारणहरूको लागि, यो पहिले नै तयार गरिएको पैसा बोक्नु राम्रो हुन्छ र एक पटक न्यू योर्कमा, आवश्यक भएमा अर्को ठाउँ फेला पार्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » न्यूयर्क » न्यूयोर्क यात्रा को लागी उत्तम सल्लाह
मल्लोर्का जानु कहिले राम्रो हुन्छ?